Real Estate Listings: » Business Directory » Home Improvement Contractors » US » New York » Brooklyn » Sky Windows and Doors1
United States, New York, Brooklyn, Brooklyn, NY 11223, 11223
Kugadziriswa kwekupedzisira 2020-10-08
Post Code: 11223
Sky Windows & Aluminum is well-known in the tri-state area for all types of quality installation projects which include: Railings, Storefronts, Curtain Wall, windows, doors, curtain walls and glass canopies. In addition to these many varieties of installations, we are also renowned when it comes to custom shower doors, Storefront, Framed Glass Partitions, Curtain Wall, Glass Partitions & Dividers, Windows, Glass Shower Doors, Doors, Glass, Cable and Metal Railings
Regended on 8. Oct 2020
Regended on October 8, 2020
Brooklyn () iguta reNew York City, rine hunyanzvi pamwe neKing County County, iri mudunhu reU.S. New York, mataundi ane vanhu vakawanda munyika, uye yechipiri-inogara vanhu vakawanda muUnited States. Ndiyo New York City inzvimbo ine vanhu vakawanda, ine vanofungidzirwa kuti 2,559,903 vagari muna 2019. Yakatumidzwa zita rekuti dunhu reDutch reBereelenin, inogovera muganho wepasi pamwe neiyo Queens kumucheto kwekumaodzanyemba kweLong Island. Brooklyn ine akati wandei bhiriji uye mugwagwa wekubatanidza kune unotora weManhattan mhiri kweEast River, uye Verrazano-Narrows Bridge inobatanidza iyo neStaten Island. Iri nenzvimbo yenyika inosvika 70.82 mamaira mamaira (183.4 km2) uye nzvimbo yemvura yemakiromita makumi maviri neshanu (67 km2), Kings County ndiyo New York yenyika yechina-idiki kanzuru nedunhu renzvimbo uye yechitatu-idiki nenzvimbo yakazara, kunyangwe iri yechipiri -Kakura kwazvo pakati pemadhuta mashanu eguta. Kana mbiri imwe neimwe yaizoverengerwa seguta, Brooklyn yaizoverengeka seyechitatu-ruzhinji muU.S., mushure meLos Angeles neChicago. Brooklyn yaive guta rakazvimiririra rakabatanidzwa (uye yaimbova iro raitenderwa musha uyeguta mukati mezvinotarisirwa kuNew York State Constitution) kusvika munaNdira 1, 1898, apo, mushure mekurwa kwenguva refu yezvematongerwo enyika uye kurwa kwevanhu veruzhinji panguva yegumi nemakumi mairi nemakumi mapfumbamwe, maererano neMutya mutsva Charter ye "Greater New York", Brooklyn yakavhenganiswa pamwe nemamwe maguta, zvimedu, uye nzvimbo kuumba Guta razvino reNew York, rakakomberedza Upper New York Bay nemahara mashanu enzvimbo. Iyo bhiri inoenderera, zvakadaro, kuchengetedza hunhu hwakasiyana. Vazhinji vavakidzani veBrooklyn vanogarwa madzinza. Musoro wepamutemo weBrooklyn, unoratidzwa pane Borough chisimbiso uye mureza, ndiEendraght Maeckt Maght, uyo anodudzira kubva pakutanga kwazvino chiDutch se "Kubatana kunoita simba". Mumakumi emakore ekutanga ezana ramakore re21, Brooklyn yakawana zororo senzira yekuenda kunzvimbo yevaridzi, pamwe chete nekunyepedzera, mutengo wedzimba unowedzera uye kuderera kwekukwanisa kwedzimba. Kubva kuma190s, Brooklyn yakashanduka kuita nzvimbo inobudirira yevemabhizinesi, yakakwira tekinoroji mafemu ekutanga, postmodern art uye dhizaini.